Blockchain News 27.07.2018 - Vaovao farany - Blockchain News
Jolay 27, 2018 Admin
Nasdaq Tompon'ny maro, varavarana mihidy fivoriana mba hanampy ara-dalàna crypto
Nasdaq Inc. mikendry ny hanampy ara-dalàna ny orinasa cryptocurrency & nampiantrano ny fivoriana mihidy-varavarana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ao Chicago, miaraka amin'ny solontena avy amin'ny tokony ho antsasaky am-polony ireo orinasa, anisan'izany ny nentim-paharazana ary koa ny fifanakalozana sy ny hafa Gemini crypto tsena, araka ny olona tsara ny hetsika. Ny fifantohana ny fanangonana, io olona io hoe:, dia ny hampirisika ny orinasa mba hanao zavatra izay hanatsara ny sary sy hanamarina ny mety ho anjara asany eo amin'ny tsena maneran-.
Ny mpitondra tenin'ny Nasdaq nanamafy ny hetsika nitranga. Anisan'ny lohahevitra noresahana tao ny fiantraikan'ny hoavy lalàna ho an'ny cryptocurrencies, izay ny fitaovana ilaina ireo ary inona no ilaina ny fanaraha-maso. Nasdaq nampahafantatra herinandro ity fa ny manome ny teknolojia ho 5 crypto fifanakalozana, anisan'izany Gemini sy SBI Virtual Currencies. Tsy heverina ho mitohy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpandray anjara. Noho ny amin'ny tantara ny illiquidity, halatra, ny hosoka sy ny tsy fisian'ny asa ponja, Wall Street no mora hifindra ho any an-toerana.
Teknolojia goavana Hitachi dia manangana blockchain-monina tondro rafitra fandoavam-bola
Tokyo-monina goavana Hitachi teknolojia sy ny Telecom operator KDDI no naka fanahy ny biometric, blockchain-monina mba handamina antsinjarany rafitra fandoavam-bola. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny blockchain Hitachi naorina teo amin'ny sehatra Fabric Hyperledger, biometric fanamarinana ny rafitra dia natao mba mampiditra ny tapakila KDDI rafitra, mamela mpanjifa miaraka amin'ny tapakila ny kery in-fivarotana fividianana mampiasa ny dian-tanana amin'izany ihany.
voalohany, rafi-ponenana ny tapakila ho trialed amin'ny KDDI Varotra antsinjarany miorina ao Tokyo sy ny fifadian-kanina sakafo baovao avy amin'ny Mr. Donut rojo. Araka ny Hitachi, mpiantsena no hisoratra anarana ny biometric vaovao ary koa ny tapakila nahazoan-dalana rehefa hisoratra anarana mampiasa ny rafitra. Ity antontan-kevitra, dia ho voaaro mialoha ny voatahiry amin'ny blockchain.
Bank of Kanada fikarohana taratasy milaza banky foibe crypto afaka mitondra tombony ara-toekarena
Banky Foibe-navoaka cryptocurrency mety afaka mitondra tombony ho an'ny fifanampiana ara-toekarena Kanada sy Etazonia, araka ny banky foibe mpikaroka. Ao amin'ny hamaroan'isa namoaka taratasy fikarohana ara Alakamisy, ny Bank of Kanada ny S. Mohammad R. Davoodalhosseini hoy ny fifanampiana fampidirana tombony ny Banky Foibe Digital Sandam-bola (CBDC) dia tombanana toy ny hatramin'ny 0.64% for Kanada & hatramin'ny 1.6% fa ny Etazonia, ny tsirairay avy raha oharina amin'ny toekarena raha vola no ampiasaina.
Miorina amin'ny tsipiriany modeling sy ny kajikajy matematika, nandroso hevitra ny mpikaroka ao amin'ny taratasy izay firenena ara-toekarena iray hahasoa - raha kely indrindra ho an'ny Kanada sy Etazonia - mety ho tsara kokoa ny fiainany amin'ny alalan'ny solon'i vola amin'ny CBDC, nanome fampiharana dia tsy tena lafo vidy.
$96.5M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao